အေးမြမြ ဆောင်းရာသီဟာ နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းပေမယ့် အသားအရေအတွက်တော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်တဲ့ ကာလတစ်ခုပါပဲ။ ဆောင်းရာသီမှာ ရာသီဥတုအေးလာတာနဲ့အမျှ စိုထိုင်းဆလည်း လျော့ကျလာတာမို့ ခြောက်သွေ့တဲ့ဆောင်းလေတွေဟာ အသားအရေကိုပါ ခြောက်သွေ့လာစေပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အရေပြားကြမ်းတမ်းတာ၊ အရေးအကြောင်းဖြစ်တာတွေပါ တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် နှုတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊ အရေပြား ပက်ကြားအက်ခြင်းနဲ့ ယားယံခြင်းတွေပါ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေ မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အသားအရေအတွက် အချိန်ပေးပြီး အထူးတလည်ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အရမ်းအေးလွန်းတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးလိုက်ရရင်တော့ တကယ့်ကို နွေးထွေးပြီး နေလို့ ကောင်းသွားမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အပူဒဏ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိသင့်တဲ့ အဆီဓာတ်တွေကို စုပ်ယူသွားတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် အရမ်းမပူတဲ့ ရေကြက်သီးနွေးလေးကိုပဲ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
၂. အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ skincare တွေကို အသုံးပြုပါ
အခုအချိန်မျိုးမှာ အစိုဓာတ်ကို အားဖြည့်ပေးဖို့ တကယ့်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ moisturizer တွေ သုံးတဲ့အခါမှာလည်း အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ စိမ့်ဝင်သွားအောင် ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အဆီပြန်တတ်တဲ့သူတွေဆိုရင် နွေနဲ့ မိုးရာသီမှာ oil control skincare တွေကို အသုံးပြုနေရင်တောင် အခုလို ဆောင်းရာသီမှာတော့ ရေဓာတ်နဲ့ အဆီဓာတ် ပြည့်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ရေချိုးဆပ်ပြာ၊ လက်ဆေးဆပ်ပြာ တွေကိုပဲ ရွေးချယ် သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
၃. Moisturizer တွေကို ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ပါ
တချို့ moisturizer တွေက petroleum-based ဖြစ်လို့ ဆောင်းလတွေမှာ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည်စိုပြေလာစေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ petroleum-based မဟုတ်ရင်တောင် သဘာဝပစ္စည်းတွေကို အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ moisturizer တွေကို အဓိထားရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒါတွေက ခြောက်သွေ့ယားယံနေတဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည်စိုပြေနူးညံ့လာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်ကို ပိုပြီးထိန်းသိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ water-based အစား oil-baed moisturizer တွေကို ရွေးချယ်သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
Girl drinking. Fruit water
၄. နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပါ
ဆောင်းရာသီဆိုတာရင် ရာသီဥတုအေးတာက အဓိကဖြစ်နေတာမို့ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းရာသီမှာလည်း နွေလိုပါပဲ။ နေရောင်ခြည်က အသားအရေကို ပျက်ဆီးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေရောင်ခြည်ကာကွယ်တဲ့ suncream တွေကို မဖြစ်မနေလိမ်းပေးဖု့ိ လိုပါတယ်။
ရာသီဥတုအေးတဲ့အခါ ကော်ဖီပူပူလေးတွေ၊ လက်ဖက်ရည်ပူပူလေးတွေ သောက်ရတာ ပိုကြိုက်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာ အသားအရေကိုအားဖြည်ပေးဖု့ိ ရေဓာတ်လိုအပ်နေဆဲဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ဒါကြောင့် ရေများများသောက်ပေးပါ။ လီမွန်တီးဆိုရင်တော့ စိတ်ကိုလဲ လန်းဆန်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လဲ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါးနီးလွန်းလို့ မမြင် သတိမထားမိတဲ့ အာလူးကြော်ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ . . .
နောက်ထပ်ဆောင်းပါး၂၀၂၅ တွင် မိခင်မှ ကလေးသို့ HIV ပိုး ကူးစက်မှု ပပျောက်အောင် ဆောင်ရွက်မည်